Viagra မဟုတ်သော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရန်နည်းလမ်း ၉ ။ ဒေါက်တာ Morgentaler၊ ဟားဗတ်ဆေးကျောင်းမှဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါဆိုင်ရာပါမောက္ခ - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
Viagra မဟုတ်သော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရန်နည်းလမ်း ၉ ။ ဒေါက်တာ Morgentaler၊ ဟားဗတ်ဆေးကျောင်းရှိဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့ပါမောက္ခ
ဆက်ဆံမှ9နည်းလမ်းများ Erectile အလုပ်မဖြစ် ဒါက Viagra မဟုတ်ဘူး
Viagra မဟုတ်သော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရန်နည်းလမ်း ၉
အပြာရောင်ဆေးပြားလေးထက် ကျော်လွန်၍ ကုသမှုကမ္ဘာကြီးရှိသည်။
သင်၏အကြိုက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းသည်အိပ်ခန်းထဲတွင်အတိအကျမပူးပေါင်းပါက၊ သင်ကြိုးစားရန်စဉ်းစားမိကောင်းဖြစ်နိုင်သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကုသ Viagra, Cialis, ဒါမှမဟုတ် Levitra လိုပဲ။ ထိုအဟေး, ဒီသေချာပေါက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူး - တကယ်တော့ဖြစ်ပါသည်, ဤအဆေးဝါးများအလုပ်သက်သေပြနေကြတယ်.
သောသူတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောပျို့, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, မူးဝြေခင်းများနှင့်မျက်နှာဖလပ်အဖြစ်အပျက်သဘောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏တစ်အိမ်ရှင်နှင့်အတူ လာ. ဟုပြောသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်သည်မည်သည့်ဆေးဝါးမကြိုးစားမီသဘာဝလမ်းကြောင်းကိုဆင်းစဉ်းစားရန်လိုပေမည် - နှင့်ကံကောင်းတာ, အဲဒီမှာ များမှာ တစ်ဦးခြားနားချက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အချို့ Non-ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုစား။
သင်သည်အမှုရောက်သော (အားလုံးပြီးနောက်, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကွဲပြားခြားနားသောယောက်ျားတွေများအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာသူ့ဟာသူကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်သည်) တစ်ခုစိုက်ထူလာပြီတစ်ခုစိုက်ထူစောင့်ရှောက်ခြင်း, သို့မဟုတ်ကာအော်ဂဇင်ရှိခြင်းရှိမရှိ, အချို့ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အသေးစားလူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီသဘာဝကုထုံးတွေကအမျိုးမျိုးသောဒီဂရီထိရောက်မှုနဲ့နောက်ကွယ်မှာသုတေသနပြုထားကြတာမို့သင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုဝင်ရောက်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဤတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ဘုံသဘာဝကုစားနည်းများ - ဤအရာသည်အလုပ်မလုပ်၊ ဘာမလုပ်ရ၊ ဤရွေးချယ်မှုများမကူသောအခါအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။
1) L ကိုမိုင်နိုအက်စစ်ဖြည့်စွက်။
L-မိုင်နိုအက်စစ် (တစ်ဦးအမိုင်နိုအက်ဆစ်) လေ့ကျင့်ခန်းတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဆက်ဆံဖို့က၎င်း၏ထင်စွမ်းရည်များအတွက်ဘတ်ဇ်ရရှိမှုထားပြီး
ဒါပေမယ့်စဉ် နိုက်ထရစ်ေအာက်ဆိုဒ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် မ သွေးကြောများတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ L-arginine ကိုယူခြင်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်ဟုပြောရန်ကြီးမားသောခုန်ခြင်းဖြစ်သည် \_ t နှင့် ဒါကလိင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လုံလောက်လိမ့်မယ်
ဒေါက်တာ Morgentaler က“ လေ့လာမှုမှာလုံးဝလုံးဝမလုပ်ပေးနိုင်တာကိုပြသထားတာမတွေ့ရဘူး။
စီရင်ချက်: က Skip ။
2) DHEA ။
DHEA သည်အားနည်းသောအန်ဒရိုဂျင် (သို့) အထီးလိင်ဟော်မုန်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒါဟာ testosterone ဟော်မုန်းရဲ့ရှေ့ပြေးနိူင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်ဒရိုဂျင်ကိုအလုပ်လုပ်တယ် လိင်တံအတွက် receptors စိုက်ထူစောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်, Morgentaler ကပြောပါတယ်။
ပြproblemနာ - အကယ်၍ သင်၏ဟော်မုန်းပမာဏပုံမှန်ဖြစ်လျှင် (သင်၏ဆရာဝန်စစ်ဆေးနိုင်သော) အကယ်၍ DHEA သည်ထူးခြားမှုများစွာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ “ DHEA ကလိင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုဟာ testosterone နဲ့တူတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကြောင့်ဖြစ်တာများတယ်။ ဒါပေမယ့် testosterone ဟော်မုန်းတွေထက်အများကြီးအားနည်းနေတယ်” ဟု Morgentaler ကဆိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည် DHEA တွင်ချို့တဲ့သော်လည်း testosterone ဟော်မုန်းမပါလျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိစေနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်မပါလျှင်သူသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်ဖွယ်မရှိဟုသူကပြောသော်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများစွာမတွေ့ရပါ။
3) Panax ဂျင်ဆင်း။
ဒါ့အပြင်စစ်မှန်တဲ့ဂျင်ဆင်းသို့မဟုတ်အနီရောင်ဂျင်ဆင်းအဖြစ်လူသိများ, Panax ginseng ဟာ ​​erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်ဆံဖို့အသက်အရွယ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအယူအဆကြောင့်သွေးကြော dilate နှင့်လိင်တံသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တစ်ဦးကအငယ်စား, ကို double-မျက်စိကန်း crossover လေ့လာမှု 45 ယောက်ျား၏အလားအလာရလဒ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားရလဒ်များအရအိပ်ယာရှစ်ပတ်ကြာမှနှိုင်းယှဉ်ဂျင်ဆင်းဖြည့်စွက်ရှစ်ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက်တိုးတက်မှုမြင်တော်မူ၏။
သို့သော် Morgentaler ကိုဤဆေးဖက်ဝင်ဆေးဝါးဖြင့်ရောင်းချခြင်းမရှိပါ။ "ကျွန်တော်ကပရိသတ်ကြီးမဟုတ်ပါ။ တကယ်လို့တစ်ယောက်ယောက်ကတကယ်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်မထောက်ခံပါဘူး" လို့သူကပြောပါတယ်။ Plus အား, ဂျင်ဆင်းတစ်ဦးပျော့လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းနှင့်တူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်အချို့သောလူများ, ပေါ်မှာ။
စီရင်ချက် - သင်လိုချင်ပါက၎င်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။ သို့သော်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသင် ၀ ယ်ပါ။
အပ်စိုက်ကုထုံးသည်သင့်အားစဉ်းစားနိုင်သမျှရောဂါသို့မဟုတ်အခြေအနေကိုကုသရန်အလားအလာရှိသောကုသမှုတစ်ခုဟုသတ်မှတ်သည်။ “ အာရုံခံအာရုံကြောများနှင့်နာကျင်မှုအမျှင်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုယန္တရားတစ်ခုမှတစ်နည်းနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်စဉ်းစားသည်။ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်သောအခါ၎င်းသည်အလွန်လုံခြုံပြီးရှိသည် အနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ.
အပ်စိုက်ကုထုံးသည် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသရန်ခိုင်လုံသောအချက်အလက်များမများသော်လည်း Morgentaler ကမူ၎င်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့စိုက်ထူမှုပြissuesနာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိရင်ဒီအမျိုးသားတွေဟာအပ်စိုက်ကုထုံးအတော်များများနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုငါထင်မြင်ဖို့လွယ်ကူလိမ့်မယ်။ "ဟုသူကပြောသည်။ သို့သော်သူကမှတ်စုစာအုပ်ကအပ်စိုက်ကုထုံးသည်လိင်တံရှိသွေးကြောများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့် ED အတွက်အော်ဂဲနစ်အကြောင်းပြချက် (ဆိုလိုသည်မှာဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောအကြောင်းပြချက်) ရှိလျှင်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
စီရင်ချက်။ ။ ဒါကရိုက်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။
5) Yohimbe ။
Yohimbe (သို့မဟုတ် Yohimbine), တစ်ဦးဖြည့်စွက် အာဖရိကသစ်ပင်တစ်ပင်၏အခေါက်မှပြုလုပ်ထားသောအရာသည်ခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်သွားသည်။ ၎င်းသည် alpha blocker (သို့မဟုတ်) သွေးကြောများကိုဖြေးစေသောဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်သုတေသနအချို့ရှိသည်ဟု Morgentaler ကဆိုသည်။ သူကသူမမှာအာရုံကြောစနစ်၊ အမျိုးသားတွေမှာလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့အာရုံကြောစနစ်အပါအဝင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းသည် orgasm ရရှိရန်ခက်ခဲသောအမျိုးသားများအတွက်အထူးအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး၎င်းသည်နှိုးဆော်ခြင်းကိုလည်းကူညီနိုင်သည်။ သူက "ဖြည့်စွက်အမျိုးအစားများအနက်မှကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သောအကြံပြုချက်ဖြစ်သည်။ "
သူကပြောပါတယ်, yohimbe အဆိုပါအရသိရသည်တိုးမြှင့်သွေးဖိအားမြန်ဆန်နှလုံးခုန်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပါအဝင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါသည် Mayo Clinic ဆေးခန်း။ အကယ်၍ သင့်တွင်နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်သွေးတိုးရောဂါရှိပါကသင်လုံးဝမသောက်သင့်ပါ။ ၎င်းကိုဖြည့်စွက်စတိုးဆိုင်မှကောက်ယူခြင်းမပြုမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်စကားပြောပါ၊ သင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသင်ဝယ်ယူကြောင်းသေချာပါစေ - အစီရင်ခံချက်များရှိခဲ့သည် yohimbe ဖြည့်စွက်ပုလင်းအပေါ်တိတံဆိပ်ကပ်ခြင်း.
စီရင်ချက်: ကတစ်ဦးကိုပစ်ခတ် Give သော်လည်း, သင်သည်ဆရာဝန်တစ်ဦးအနေဖြင့် OK ကိုရသာပါ။
သငျသညျဖို့လိုအပျပါလျှင် အချို့သိသိသာသာ poundage dropဤအချက်သည်သင်၏လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ပါ ၀ င်ပါစေ -“ အဝလွန်ခြင်းသည် testosterone ဟော်မုန်းကိုလျော့နည်းစေပြီး testosterone ဟော်မုန်းသည်လိင်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်” ဟု Morgentaler ကဆိုသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းကသင့်ကိုပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိစေနိုင်သည်။ သူက "ကိုယ်အလေးချိန်ကျတဲ့အခါလူတွေကပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ခံစားရပြီးပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိရင်လူတွေကိုပိုပြီးလှည့်စားမှုပိုဖြစ်စေတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာလိင်ဆက်ဆံဖို့ပိုပြီးပွင့်လင်းတယ်" လို့သူကပြောပါတယ်။
zzz's ကိုကျော်သွားခြင်းသည် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဒေါက်တာ Morgentaler က“ အိပ်လို့မပျော်တဲ့သူတွေဟာလိင်ဆက်ဆံဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။
တစ် ဦး အတွက်အိပ်ချိန်မသောက်ခြင်းသည်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော testosterone ဟော်မုန်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှုကိုမြင့်တက်စေသည်။ သူက "သင်ကတိရစ္ဆာန်တွေကိုဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာယူပြီးသူတို့ကိုလုံလောက်စွာဖိအားပေးတယ်ဆိုရင်၊ သူတို့အတွက်ပထမဆုံးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့လိင်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုပါပဲ"
ဤနေရာ၌ပြင်ဆင်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ တစ်ညလျှင်အနည်းဆုံး ၈-၉ နာရီအိပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ သင်မလုပ်နိုင်လျှင်အိပ်ချိန်စာရွက်စာတမ်းမှအကူအညီရယူပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများသည်အိပ်ခန်းထက်ကျော်လွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီထက် porn အကဲခတ် 8) ။
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအတွက်လုံးဝကျန်းမာထွက်ပေါက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာစိုက်ထူခြင်းတစ်ကိုယ်တော်ရနိုင်သော်လည်းသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်မတွေ့လျှင်ပြifနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထသည်၎င်းကိုကျိန်းသေဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့သောညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံများဟာမင်းရဲ့ပုံပန်းသဏ္onာန်အပေါ်အကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တဲ့သင်ဘယ်လိုကြည့်ရှုသင့်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့မကျတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဆက်လက်ရှင်သန်နေစေလို့ပါပဲ။ စတင်သူများအတွက်ယောက်ျားအများစုသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုနာရီနှင့်နာရီအပြီးသတ်ချေမှုန်း။ မရပါ။
အောက်ဆုံးလိုင်း: "အမှန်တကယ်အထူးသဖြင့်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတိုးတက်လာဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်, လမ်းပြန် porn အသုံးပြုမှုအပေါ်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပြီး, ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင် အများကြီး ကျနော်တို့အဲဒီလိုလုပ်ရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေရလိမ့်မယ်” ဟု Morgentaler ကဆိုသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များမှကွဲပြားမှုမရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ Morgentaler က“ ဒီကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတွေကိုကြိုးစားရတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လိင်ကိစ္စကတကယ်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လူအများအတွက်အခုလုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။
သငျသညျ boner- လျော့နည်းတိတ်ဆိတ်ခံရဖို့မလိုအပ်သင့်ပါတယ်။ “ လိင်သည်သာမန်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြီးမားဆုံးသောပျော်ရွှင်မှုများပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ဒါကဆက်ဆံရေးဟာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာအတွက်အဓိကအချက်ပဲ” ဟု Morgentaler ကဆိုသည်။ ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေခါးပတ်အောက်မှာအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လုံးဝအကျိုးရှိပါတယ်။